श्रीलंका, एक टापु पनि जो भारत को आँसु भनिन्छ | Absolut यात्रा
श्रीलंका धेरै दशकहरु बाट पिटेको ट्र्याक बाहिर छ। जहाँसम्म, यो बप्तिस्मा गरिएको छ कि एक अद्भुत ठाउँ हो "भारतको आँसु" दुबै टापुको आकारबाट जुन यो फेला पर्दछ र त्यो विशाल देशको मुनि रहँदै, जुन बाट पाल्क स्ट्रेट.
यसको प्राकृतिक पार्कहरू भ्रमण गर्नुहोस् जहाँ तपाईं हात्ती र चितुवाहरू स्वतन्त्रतामा पाउनुहुनेछ; उत्तर मा हिमाली परिदृश्य को माध्यम बाट यात्राaपर्यटक रेल चिया क्षेत्रहरू हेर्दै; जब यो भनिन्थ्यो औपनिवेशिक शहरहरू भ्रमण गर्नुहोस् सिलोन; दक्षिणमा यसको अद्भुत जंगली समुद्री किनारहरूको आनन्द लिनुहोस् वा ठूलो चट्टान कुँदिएको बुद्धको प्रभाव महसुस गर्नुहोस् श्रील Sri्कामा तपाईंले गर्न सक्ने केही चीजहरू। यदि तपाईं यस सानो एशियाली देशलाई अझ राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 श्रीलंकामा के हेर्ने र के गर्ने
1.2 जाफना, तमिल शहर
1.3 Polonnaruwa, श्रीलंका को पुरानो राजधानी
1.5 अनुराधापुरा, तेस्रो शीर्ष
1.6 औकान बुद्ध
1.7 मिन्नेरिया, श्रीलंकाको एक राष्ट्रिय पार्क
1.8 एला, श्रील Lanka्काको पहाडहरू
1.9 नुवारा इलिया
1.10 Dambulla को गुफाहरू
1.11 क्यांडी, मन्दिरहरूको शहर
1.12 दक्षिणी श्रीलंकाको समुद्री तट
2 पुरानो सिलोन जानु कहिले राम्रो हुन्छ
3 श्रीलंका कसरी पुग्ने
4 श्रीलंकामा के खाने छ
श्रीलंकामा के हेर्ने र के गर्ने
श्रीलंकाले, जस्तो हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, लगभग ,66000 XNUMX,००० वर्ग किलोमिटरको ठूलो आँसुको आकार। तसर्थ, यो उदाहरण को लागी केहि सानो छ Andalusia। यद्यपि योसँग तपाइँसँग अफर पनि धेरै छ। यसलाई हेरौं।
यद्यपि देश को राजधानी छ श्री जयवेंडरपेरा कोटी, सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहर कोलम्बो हो, औपनिवेशिक भवनहरू, आधुनिक निर्माण र भग्नावशेषहरू जोड्ने आधा लाख भन्दा बढी बासिन्दाहरूको महानगर।
आवश्यक स्थानहरू जुन तपाईंले यसमा अवलोकन गर्नुपर्दछ प्रभावशाली हुन् जामी उल फर मस्जिद, यसको टावरहरू र यसको हडताई रातो र withको साथ; को मुरुगन हिन्दू मन्दिर, यसको अलंकृत आर्किटेक्चरल फारमहरूको साथ; को Nelum Pokuna थिएटर, एक अद्भुत आधुनिक निर्माण र गंगारामाया बौद्ध मन्दिर, सबै श्रीलंकामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक।
बिभिन्न चरित्रको बहिष्कृत पड़ोसी छ Canela उद्यान, जहाँ तपाईं विहारमहादेवी को महान पार्क पाउनुहुनेछ, र ग्याल अनुहार हरियो, अर्को imposing हरियो esplanade। अन्तमा, विशाल वरिपरि हिंड्नुहोस् पेट्टा बजार र भ्रमण गर्नुहोस् राष्ट्रिय संग्रहालय, एक सुन्दर शास्त्रीय भवनमा अवस्थित।
जमिल उल फर मस्जिद
जाफना, तमिल शहर
तपाईंको अनुवाद हुनेछ हार्प्सको शहर र यो मुख्य केन्द्रक हो तामिल संस्कृतिसन् २०० until सम्ममा गृहयुद्धले देशलाई तहसनहस पारेपछि अब गिरावट आएको छ। यो उत्तरी शहरमा तपाईंले अवश्य जानुपर्नेछ फोर्टलेजा पोर्चुगिजले १th औं शताब्दीमा निर्माण गरेको हो।
तर सबै भन्दा माथि, यसको धेरै मन्दिरहरू, तिनीहरू मध्ये केही वास्तवमै नेत्रतल। यो कुरा हो नाल्लर कान्डास्वामीश्रीलंकामा सबैभन्दा ठूलो धार्मिक भवन; को नागपूशानी अम्मान, नैनाटिवु टापुमा, वा बाट वरथाराजा पेरुमाल, मूर्तिकलाहरूले भरिएको।
Polonnaruwa, श्रीलंका को पुरानो राजधानी
कल अप गर्नुहोस् श्रीलंका सांस्कृतिक त्रिकोण, जसका अन्य दुई शिरोबिन्दुहरू सिगिरिया र अनुराधापुरा हुन् र जुन घोषित भएको छ विश्व सम्पदा युनेस्को द्वारा
Polonnaruwa तपाईं एक महान पुरातात्विक साइट प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं सबै माथि देख्न को लागी गल विहार बुद्ध, तीन प्रभावशाली आंकडा विभिन्न आसनहरूको साथ चट्टानमा नक्काशी गरियो। कुनै चीजको लागि होईन, यो १th औं शताब्दीसम्म श्रीलंकाको राजधानी थियो।
यो पुरानो शहर को रूप मा बप्तिस्मा गरिएको छ सिंह रक लगभग चार सय मिटर अग्लो विशाल चट्टानमा भएकोले। त्यहाँ तपाईं अवशेषहरू देख्न सक्नुहुन्छ राजा क्यास्यापाको दरबार। यसमा चढ्नको लागि, तपाईंले भर्या .मा चढ्नुपर्नेछ, जसको पहुँच फ्लान्क गरिएको छ, ठीकै छ, दुई सिंहको पञ्जा द्वारा।
अनुराधापुरा, तेस्रो शीर्ष
विगतका शहरहरू भन्दा बढी देखी यो बौद्ध धर्मको लागि एक पवित्र शहर हो। यसले हाइलाइट गर्दछ रुवानवेलिसया र थुपारामा स्तूपहरूदुबै, ख्रीष्टसामु। यी समाधिस्थलहरु मध्ये पहिलो एक प्रभावशाली सेता संगमरमर निर्माण हो।
तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ईसुरुमुनिया मन्दिरजुन चट्टानमा खोपिएको छ, र श्री महा बोधि, जसमा परम्परा अनुसार रूख काट्ने ठाउँ राखिएको हुन्छ बुद्ध निर्वाण पुगे। अन्तमा, यस शहरबाट केहि किलोमिटर टाढा मन्दिरहरू र स्तूपहरूको जटिल हो मिहिन्टाले.
श्रीलंकाको सांस्कृतिक त्रिकोणको नजिक तपाईंले यस प्रभावकारी पाउनुहुनेछ बाह्र मिटर अग्लो मूर्ति र चट्टानमा खोपिएको। यसले पूर्ण लम्बाईमा प्रतिनिधित्व गर्दछ र XNUMXth औं शताब्दीमा मिति तय गरिएको छ। पहिले यो अभयारण्य भित्र थियो, तर यसको विनाशले यसलाई खुला हावामा छोडेको छ, यसले आफ्नो प्रभावशाली दृश्य बढाउँदछ।
मिन्नेरिया, श्रीलंकाको एक राष्ट्रिय पार्क
त्यहाँ धेरै राष्ट्रिय पार्कहरू छन् जुन तपाई श्रीलंकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये, होर्टनको मैदान, पहाडी र चिया बगैंचाले भरिएको; एउटा विल्पट्टू, देश मा सब भन्दा ठूलो, वा उदावाला, अफ्रिकाको सवानाको सम्झना दिलाउने।
तर मा मिनेरिया योसँग एक प्रभावशाली परिदृश्य छ र साथै, यो ठूलो संख्यामा छ एलिफान्ट्स। यदि तपाईं अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, खडेरीसँग, यसले उनीहरूलाई कल गर्ने कारण गर्दछ "एकाग्रता", दर्जनौं जनावरहरू एक खालको वरिपरि भेला भए।
एला, श्रील Lanka्काको पहाडहरू
यो सानो हिमाली शहरमा धेरै आकर्षणहरू छन्। ती मध्ये, असंख्य पैदल यात्रा त्यो उहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, एक तपाइँ ले लाग्छ कि सानो एडम्स पीक, दुई हजार मिटर भन्दा बढि उचाइ जुन तपाईंलाई उपत्यकाहरूका अद्भुत दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई भन्दछौं कि यसको शीर्षमा एक पदचिह्नको आकारमा चट्टान छ र त्यो कथाले भन्छ कि यसले पहिलो पदचिन्ह प्रतिबिम्बित गर्दछ। आदम पृथ्विमा।
तर यदि क्षेत्र सुन्दर छ, त्यहाँ पुग्न को लागी कुनै कम बाटो छैन। तपाईं यो सवार मा गर्न सक्नुहुन्छ पर्यटक रेल त्यो पनि तपाइँ dizzizing परिदृश्य सौंदर्य को पूर्ण प्रदान गर्दछ।
उही ट्रेन जुन तपाईंलाई एलामा पु .्याउँछिन् पनि तपाईंलाई नुवारा एलिया, औपनिवेशिक भवनहरूको सुन्दर शहरमा लैजान्छ। जे होस्, उनको बारेमा सबै भन्दा विशेषता कुरा उनको भारी हो चिया वृक्षारोपण स collect्कलनकर्ताहरूको समूह संग काम गर्दै।
Dambulla को गुफाहरू
यस्तो पनि भनिन्छ सुनौलो मन्दिरती पृथ्वीमा पाँचवटा गुफा हुन् जुन बुद्धका चित्रहरू र दुई हजार वर्ष भन्दा पुरानो बुद्धको मूर्तिहरू छन् जुन तिनीहरू राम्ररी संरक्षित छन्। तपाईंले श्रीलamb्काको मध्य भागमा सिरिगीयाको नजिक दम्बुला गुफाहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
क्यांडी, मन्दिरहरूको शहर
पहाडहरूका बीचमा क्यांडी पनि छ, जुन यसको औपनिवेशिक भवनहरूको लागि खडा छ, तर सबै भन्दा माथि यसको धेरै मन्दिरहरूको लागि। यी बीचमा, बुद्धको दाँत संग एक, जसले त्यो अवशेष राख्दछ र रोयल प्यालेस, एक पुस्तकालय, संग्रहालय र अन्य साना धार्मिक भवनहरू मिलेर बनेको जटिलको अंश हो।
तपाईले मन्दिरको भ्रमण गर्नु पनि पर्छ कटारागामा, पट्टिनी y विष्णु, मठहरु बिर्सन बिना मालवाटा र को Assigiriyaconसाथै पेराडेनिया बोटानिकल गार्डेन, जुन करिब छ किलोमिटर टाढा छ।
बुद्ध टूथ मन्दिर
दक्षिणी श्रीलंकाको समुद्री तट
एशियाई देशले तपाईंलाई यसको दक्षिणी भागमा, असाधारण जंगली र आकर्षक तटहरू प्रस्ताव गर्दछ। यसको सुनको बालुवाले ताडको रूखहरू र यसको क्रिस्टल स्पष्ट पानीले तपाईंलाई तपाईंको भ्रमणबाट आराम गर्न अनुमति दिनेछ। तर, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईं सर्फ वा डाइभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरू मध्ये केहीमा, कछुवा र ह्वेल स्पट.
केहि सब भन्दा सुन्दर समुद्र तट ती हुन् अनवातुना, मेडकेटीया, अरुगम खाडी o मिडिगामा। तर सबैभन्दा अनौठो मध्ये एक त्यो हो मिरिसाजहाँ तपाईं प्रख्यात अट्टेरी मछुवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ कार्यमा र, थोरै पैसाको सट्टामा, उनीहरूसँग फोटो खिच्नुहोस्।
पुरानो सिलोन जानु कहिले राम्रो हुन्छ
प्राचीन सिलोनले सुविधाहरू उष्णकटिबंधीय मौसम महासागरीय हावाले मोडरेट गरे। तापक्रम फरक पर्दछ कि तपाईं उच्च पहाडमा हुनुहुन्छ वा तटमा हुनुहुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ, तर तिनीहरू अत्यन्तै उच्च हुन्छन् र सबै भन्दा माथि, त्यहाँ धेरै आर्द्रता हुन्छ। गर्मीको सुरूवातमा नै मानसून आइपुग्छ, यो टापुको दक्षिण र पश्चिममा ठूलो वर्षा हुन्छ जुन अक्टोबरदेखि जनवरीको महिनाहरूमा उत्तर र पूर्वमा सर्दछ।
यी सबै कारणहरूको लागि, हामी तपाईंलाई श्रीलंका भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं जनवरी र मे महिना बीच। जे होस्, यो याद राख्नुहोस् कि टापुमा उच्च मौसम डिसेम्बर र जनवरीमा हुन्छ, त्यसैले रहन अधिक महँगो हुनेछ।
श्रीलंका कसरी पुग्ने
श्रील Lanka्काले छ दुई एयरपोर्टहरू। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कोलोम्बोमा छ र अर्को यस टापुको दक्षिणमा मटालामा छ। देशमा प्रवेश गर्न तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ भिसा, तर तपाईं यसलाई अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसको मूल्य तीस यूरो छ। हामी तपाईंलाई किरायामा राख्न सल्लाह दिन्छौं यात्रा बीमा यो के हुन सक्छ को लागी।
एक पटक स्थापना भएपछि टापुमा घुम्न तपाईंसँग धेरै छ बस लाइनहरु जो वास्तवमै सस्तो छ। जे होस्, हडबडको बारे बिर्सनुहोस्। तिनीहरूसँग असंख्य स्टपहरू छन् र मुश्किलले चालीस किलोमिटर एक घण्टाको यात्रा गर्छन्। तपाईं पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ ड्राइभरको साथ कार। यो पनि धेरै महँगो छैन र यो धेरै छिटो छ।
हिमाली क्षेत्रमा यात्रा गर्न हामी यो अनौंठो रेलको सिफारिस गर्दछौं जुन हामीले तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेका छौं र छोटो दूरीका लागि तपाईसँग जिज्ञासु छ tuk tuk भारत मा जस्तै लोकप्रिय, मा थाईल्याण्ड र एशिया भर।
अन्तमा, यो नबिर्सनुहोस् कि देशको आधिकारिक मुद्रा हो श्रीलंकाको रुपैया, जुन हाम्रो यूरो भन्दा धेरै कम छ। विशेष रूपमा, एक यूरो को लागी लगभग एक सय र सत्तर रुपैयाँ को मूल्य छ।
श्रीलंकामा के खाने छ
सानो एसियाली देशको ग्यास्ट्रोनोमीमा ठूलो विविधता वा गुण छैन, भारतको छेउमा भएकोमा आश्चर्यको कुरा हो। राष्ट्रिय पकवान बराबर छ करी भात यसको बिभिन्न प्रकारहरूमा: तरकारी, कुखुरा, माछा र पद्दु वा दाल पनि।
सामान्य पनि छन् नूडल्स; चामल वा फ्राइड नूडल्स मनपर्दछ biryani, जो कुखुरा वा मासु, तरकारीहरू, मसलाहरू र थोरै दही, वा कोट्टु, जसले फ्राइड नूडल्स, तरकारीहरू, र रोटी रोटीका टुक्राहरू समावेश गर्दछ। साथै, तटीय क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा क्षेत्रहरू छन् माछा भुनी वा ग्रील्ड।
पछिल्लोको फरक संस्करण हो माछा अम्बुल थायल, एक अमिलो माछा करी जुन यो टचलाई धन्यवाद प्राप्त गर्दछ गोराका सुख्खा, स्थानीय फल आफ्नो पक्ष को लागी, कुकुल यो कुखुरा करी को श्रीलंका संस्करण हो। तर अझै उत्सुकता भनेको त्राई अण्डा बनाउने उहाँको तरिका हो। उनीहरूले फोन गरे अण्डा हप्पर र सेतो रह्यो भनेजस्तो यो टोकरी जस्ता छ।
मिठाई को रूप मा, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ kokis, चामलको पीठो र नरिवलको दूधले बनेका कुकिजहरू, र नरिवल रोटी, जसले नरिवल दाढीको साथ यस विशिष्ट रोलि bread रोटी समावेश गर्दछ।
पेय पदार्थहरूको सन्दर्भमा, यो असाधारण लिनु लगभग बाध्यता हो सिलोन चिया, देश मा आय को एक महान स्रोतहरु। र अन्तमा, केही सल्लाह। भारतमा जस्तै श्रीलंकामा पनि खाना खाइन्छ एक्दमै तातो। तसर्थ, यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन वा यसले तपाईंलाई चोट पुर्‍याउँछ भने, तपाईंको थाल अर्डर गर्ने बित्तिकै भन्नु बेस हुन्छ।
अन्तमा, श्रीलंका एक सुन्दर देश हो जुनसँग मनपर्ने सबै कुरा छन्: अद्भुत जंगली समुद्री किनार, सुन्दर पहाडी परिदृश्य, प्राकृतिक जग्गाका धेरै प्राकृतिक पार्कहरू र प्रभावशाली स्मारकहरू। के तपाईं यात्रा गर्न हिम्मत गर्नुहुन्छ भारतको आँसु?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » श्रीलंका